Maxaabiistii laga keenay Itoobiya oo la kulmay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maxaabiistii laga keenay Itoobiya oo la kulmay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre (SAWIRO)
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano iyo safiirka Itoobiya u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa maanta booqday in ka badan 100 maxaabiis Soomaali ah oo in muddo ah ku xirnaa xabsiyadda ku yaalla dalka Itoobiya islamarkaana xalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo marka hore la hadlay maxaabiistaasi ayaa u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la qeybsado farxadda ay dhalinyaradaasi dareemayaan, maadaama ay dib ula midoobayaan ehelkii iyo dadkoodii.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay inay jiraan dhalinayaro kale oo ku dhibaataysan dunida oo dhan, loona baahan yahay in laga shaqeeyo sidii ay dalkooda dib ugu soo laaban lahaayeen iyagoo xor ah.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo ay ka muuqatay sida uu uga murugsan yahay in dhalinyarda oo ah mustaqbalkii dalkeena ay ku jiraan xabsiyo ayaa tilmaamay in aysan jirin wax ka wanaagsan qaranimo, isagoona hadalkiisa wata ayaa yiri:-
“Waxaan ka xumahay dhibaatada soo gaartay dhalinayarada Soomaaliyeed kadib dowlad burburkii Soomaaliya, taas oo keentay in dhalinyaradeenu ay u kala hayaanto wadamo shisheeye oo ay ku qabaan dhibaato, qaarkoodna ay ku jiraan xabsiyada aduunka oo cidina aysan ku ogeyn, balse dowladda Soomaaliya ka shaqeyn doonto sidii ay dhalinyaradaas dib ugu heli lahaayeen mustaqbalkii ka lumay” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in aysan gacanta ku hayn wixii ay xaq u lahaayeen dhalinyarada, balse ay ka shaqeyn doonaan arrintaas, si loo hagaajiyo mustaqbalka dalka maadaama ay dhalinyaradu yihiin dadka ugu badan bulshada Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, qaar kamid ah maxaabiista oo shucuurtooda ka hadlay ayaa muujiyay dareen wadaniyad iyo dal jaceyl ah, waxayna qireen in Soomaalidu ay danteeda ku gaari karto wadajir iyo midnimo.
Dhalinyaradaasi ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in loo sameeyo fursado waxbarasho iyo kuwo shaqo, maadaama ay qaarkood yihiin dhalinyaro waxbaratay oo aqoon leh si ay dalkooda ugu faa’iideeyaan cilmigooda.
Qaar ka mid ah ehelada maxaabiista Muqdisho la keenay oo sidoo kale goobta ka hadlay, ayaa dowladda Soomaaliya uga mahadceliyay iyo cid walba oo gacan ka geysatay soo daynta dadkooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan u gashay sidii maxaabiistaan ku xirnaa dalka Itoobiya loogu soo wareejiyo Soomaaliya, si dambiyada loo heysto iyo xabsiyada ay ku xukunman yihiin ku qaataan gudaha dalkooda.
Hoos ka Daawo Muuqaalka VIDEO-ga iyo Sawirada